Sidee ayay u socotaa howsha lagu dhaqangelinayo Jadwalka – Axadle
Dhaq-dhaqaaq iyo diyaargarow sidaas u weyn kama socda magaalooyinka maamul Goboleedyada & Gobolka Banaadir oo xarun u ah DFS, si loo magacaabo xubnaha Guddiga farsamo ee Doorashada 20/21.
1-dii bishaan Oktoobar, Madxda DFS & Dowlad Goboleedyada ayaa ku heshiiyay in la dhiso Guddi Farsamo oo labada dhinac ah si uu u dhaqangelinayo Jadwalka doorashada 20/21 lagu hagayo.
Magacaabista Guddiga ayaa ku taariikheysan inta u dhaxeyso 10-ka bishaan oo ku beegan Sabtida bilawga todobaadka soo socda ilaa 20-ka Oktoobar, si Guddigu uu u bilaabo waajibaadka laga doonayo.
Heshiiska waxaa lagu soo bandhigay shuruudaha laga doonayo qofka kamid noqonaya xubnaha Guddiga heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed oo tallaabada koowaad u ah u dhaqaaqista doorashada Soomaaliya.
Haddaba Aqriste, ma isleedahay jadwalka Doorashada 20/21 waxa uu u hirgelayaa sida loo diyaariyay?
Maxaa lagaaga baahan yahay haddii aad rabto in aad kamid noqoto xubnaha Guddiga Doorashada DFS & DG 20/21?
Maxaa shuruud ah oo laga doonayaa Ergada, Musharaxa Xildhibaanka & Senatarka BFS?
Farmajo ends the Eritrea journey after a two-day keep in Asmara